kahor kulanka Derby di Milano Zamorano oo isbarbardhig ku sameeyay Icardi iyo Higuaín, xidigee ayuu u arkaa inuu fiican yahay? – Gool FM
kahor kulanka Derby di Milano Zamorano oo isbarbardhig ku sameeyay Icardi iyo Higuaín, xidigee ayuu u arkaa inuu fiican yahay?
(Serie A) 20 Okt 2018. Weeraryahankii hore ee kooxda Inter Milan Iván Zamorano ayaa sheegay in Mauro Icardi oo ah xiddiga Nerazzurri uu ka fiican yahay xiddiga ay isku wadanka kasoo wada jeedaan ee kooxda Milan Gonzalo Higuaín.
Iván Zamorano ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Sky Italia” ee dalka Talyaaniga kahor kulanka Derby di Milano ay habeen dambe ku wada ciyaari doonaan horyaalka Talyaaniga kooxaha Milan iyo Inter.
“Kulanka Derby di Milano ma jirto koox la door bidayo, lakiin 90-ka daqiiqo waa inaad ka fiican tahay kooxda kaa soo horjeeda”.
“Waa inay Inter guuleysataa kulankan, dhinaca kale Mauro Icardi ayaa ka fiican Gonzalo Higuaín, wuxuuna dhalin doonaa gool kulanka Axada ee soo aadan, sida uu soo sameeyay kulankii Derby-ga ee ugu dambeeyay.
AC Milan ayaa marti u noqon doonta dhigeeda Inter Axada bari ah kulanka Derby di Milano, kaasoo ka tirsan kulamada 9-aad ee horyaalka dalka Talyaaniga.
Liverpool oo Guul Nafle CAARI ah ka gaartay Kooxda Huddersfield Town+SAWIRRO
Barcelona oo Kusoo laabatay Hogaanka horyaalka La Liga Kaddib guul Muhiima oo ay ka Gareen Sevilla+SAWIRRO